Software सफ्टवेयर सेवा सेवा सम्झौताको रूपमा जोगिनु हुँदैन Martech Zone
हाम्रो एजेन्सी जसले पूर्ण रूपमा हाम्रो ग्राहकहरूलाई समर्थन गर्दछ, हामी अनुप्रयोगहरू र प्लेटफर्महरूको लागि सम्झौता खरीद गर्छौं हाम्रो ग्राहकहरूको प्रयासहरूको पूर्ण समर्थन गर्न। ती ती सबै सम्बन्धहरूसँग एक सेवा रूपमा सफ्टवेयर (सासा) विक्रेताहरू शानदार छन् - हामी अनलाइन साइन अप गर्न सक्छौं र हामी सकिएपछि रद्द गर्न सक्दछौं। पछिल्ला वर्षमा, यद्यपि हामी शाब्दिक रुपमा धेरै केहि करारहरुमा लगिएका छौं। अन्तमा, यो राम्रो प्रिन्ट वा भ्रामक बिक्री थियो जसले हामीलाई कोषहरूको केही हदसम्म गुमायो। म यहाँ नामहरू लिन गइरहेको छैन, तर केहि कम्पनीहरू धेरै लोकप्रिय छन् - त्यसैले होशियार रहनुहोस्। कम्पनीहरू जसले यी घोटालेहरूको फाइदा लिन्छन् उनीहरू कहिले पनि मेरो व्यवसाय वा मेरो सिफारिश प्राप्त गर्दैनन्।
न्यूनतम सम्झौता लम्बाई - खाता व्यवस्थापन र अनबोर्डिंग प्रक्रियाहरूसहितको सेवा कम्पनीहरूको रूपमा सफ्टवेयरले नयाँ ग्राहकलाई प्राप्त गर्न र चालु राख्न धेरै पैसा खर्च गर्छ। यो धेरै पैसा हो - मलाई विश्वास गर्नुहोस्। विगतमा एउटा उद्यम ईएसपीको लागि काम गर्दै, हामी हजारौं डलर खर्च गर्न सक्दछौं ग्राहकलाई आफ्नो पहिलो ईमेल पठाउँदै। नतिजाको रूपमा, न्यूनतम अनुबंध लम्बाइ चाहिन्छ कम्पनीको स्वास्थ्यको लागि अत्यावश्यक थियो। समस्या यो हो कि धेरै सेल्फ-सर्भिस सासले उनीहरूले आफ्नो सर्तमा न्यूनतम करारको लम्बाइ लुकाउने निर्णय गरिसकेका छन्। यदि तपाईं साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ क्रेडिट कार्ड र आज नै तपाइँको खाता प्रयोग गर्न सुरू गर्नुहोस्, तपाइँ आज तपाइँको खाता रद्द गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। ठीक प्रिन्ट हेर्नुहोस्। हामीले एउटा एसईओ इञ्जिन भेट्टायौं जुन हामीले साइन अप गरेका थियौं र expectations महिनाको न्यूनतम अनुबंध भएको अपेक्षामा बाँचेनौं। म पर्याप्त विश्वास गर्दछु कि न्यूनतम आवश्यकता मात्र हो किनकि उनीहरूको प्लेटफर्म अधिक प्रतिबद्ध, अन्त-वितरित थियो र उनीहरू केवल अधिक पैसाका लागि ग्राहकहरूलाई स्क्याम गर्दै थिए।
आज साइन इन गर्नुहोस्, बिल भोली - तपाईको सास बिक्री प्रतिनिधि तपाईको सब भन्दा राम्रो साथी छ तपाईको बन्द सम्म। त्यहाँ अर्को शब्द छ बिक्री वाचा त्यो एउटा करारमा लेखिएको छैन। यसलाई ए भनिन्छ झूट। हामीले गत बर्ष ढिलो एउटा प्रमुख प्लेटफर्म विक्रेतासँग वार्षिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यौं। बिक्री व्यक्ति धेरै दबाबमा थियो र वर्षको लागि तार अन्तर्गत नजिक हुन चाहन्थे त्यसैले उनले हामीलाई प्रतिज्ञा गरे कि उनीहरूले बिल नबनाउन्जेल हामी प्लेटफर्म प्रयोग गर्न सुरु नगरे। हामी हस्ताक्षर गरे र तुरुन्तै प्लेटफर्मको लागि आमन्त्रित गरियो। जब मैले तुरून्त बिल तिर्ने छैन, यो संग्रहमा पठाइयो। अब संग्रह कम्पनीले हामीलाई सताइरहेको छ। आजको दिन सम्म, म कहिले प्लेटफर्मको प्रयोग गरेको छैन र मैले भुक्तानी गरिरहेको छैन। यदि उनीहरू चाहन्छन् भने तिनीहरू मुद्दा हाल्न सक्छन्। म निश्चित छु कि उनीहरूले कानुनी बिलमा मभन्दा पहिले डलर लिने बढी खर्च गरे।
एजेन्सी प्याकेजहरू - मेरो साथ एक व्यक्तिगत सम्बन्ध थियो कि एक कम्पनी केही वर्ष पहिले उनीहरूसँग एजेन्सी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न मलाई प्रोत्साहित गर्‍यो। एजेन्सी अनुबन्ध अन्तर्गत, हामी न्यूनतम मासिक शुल्क तिर्ने छौं र त्यसपछिaप्रति ग्राहक रिटेल लागतको ~~% को मासिक शुल्क छुट। एजेन्सी प्याकेजले हामीलाई प्रीमियम समर्थन, सबै सुविधाहरूमा पूर्ण पहुँच, उत्पादन सल्लाहकार समितिको सीट, र तिनीहरूको साइटमा एक अधिकृत एजेन्सीको रूपमा सूचीबद्ध प्राप्त गर्न सक्षम गर्दछ। यो एक उत्तम सम्झौताको जस्तो लाग्थ्यो - जब सम्म हामीले यो पढ्दैनौं कि हामीले हाम्रा क्लाइन्टहरूलाई १००% समर्थन प्रदान गर्नुपर्‍यो। मान्छे - त्यहि हो सबै लागत हो! मैले समर्पित समर्थन कर्मचारी वहन गर्न सक्षम हुन दर्जनौं ग्राहकहरूलाई हस्ताक्षर गर्नु पर्ने थियो र सम्बन्धबाट अझै पनि मुनाफा। हामी यस प्रदायकलाई ग्राहकहरू सन्दर्भ गर्न जारी राख्ने छौं, तर हामी कहिले पनि एजेन्सी कागजमा हस्ताक्षर गर्नेछौं।
उपयोग र औसत शुल्क - महान सफ्टवेयर कम्पनिहरु उनीहरूको उपयोग शुल्कहरु बारे धेरै पारदर्शी छन् - विशेष गरी जब यो आउँदछ अत्यधिक मात्रा शुल्क हामी अमेजन जस्ता मोडेलहरू मन पराउछौं जसले प्रयोगका लागि चार्ज गर्दछन् र उनीहरूको प्लेटफर्महरूको अधिक प्रयोग गर्नुहुन्छ। कम्पनीहरू जस्तै सर्कप्रेस रेकर्डहरू र ईमेलहरू तपाईंले पठाउनु भएको संख्याको आधारमा तपाईंको करारमा तपाईंलाई राम्रोसँग माथि वा तल सार्नेछ। जति तपाईले पठाउनुहुन्छ, प्रति पठाउने कम मूल्य। अन्य कम्पनीहरूले वास्तवमा तपाईलाई प्रयोगका लागि दंड दिन्छन्। जब हामी एक ठूलो इनबाउन्ड मार्केटिंग प्लेटफर्मले हामीलाई सूचित गर्‍यौं कि उनीहरूले हाम्रा लागतहरू चौगुना गरिरहेको छ जब हामीले हाम्रा सबै सम्पर्कहरू उनीहरूको सिस्टममा आयात गर्‍यौं - केही होईन। बिक्री प्रक्रियामा छलफल भयो (यो तिनीहरूको साइटमा खुलासा गरिएको थियो तर हामीले यसलाई हरायौं)। अन्य कम्पनीहरूले एक प्रीमियम चार्ज गर्दछ जब तपाईं उनीहरूको प्रणालीको तपाईंको आवाश्यक प्रयोगमा जानुहुन्छ (ब्यान्डविथ, खाताहरू, ईमेलहरू, अभियानहरू, आदि)। निश्चित गर्नुहोस् कि उपयोग र अधिक शुल्क शुल्कहरू तपाईंको लगानीमा फिर्तीसँग सम्बन्धित छन् र वास्तवमा प्रणालीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्दछ।
स्वत: नवीकरण - म तपाईंलाई सफ्टवेयर परीक्षण गर्नका लागि साइन-अप गर्ने कम्पनीहरूले कति चोटि फालिदिएँ भनेर म भन्न सक्दिन, मैले यसलाई रद्द गरें, र अर्को महिना मलाई फेरि चार्ज गरियो। यसले कम्पनीको आकार जस्तो फरक पार्दैन, यो साना साना गतिविधिहरू र विशाल व्यक्तिहरूसँग भएको छ। सम्झौता स्वत: नवीकरण गरिएको छ र समयको अगाडि खोज्नुहोस् र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि कम्पनीलाई नवीकरण गर्नु अघि तपाईंको अनुमति आवश्यक छ वा यदि तपाईंसँग नविकरणको तत्काल योजना छैन भने।
सम्झौताहरू, सेवा सर्तहरू र बिलि Terms सर्तहरू विक्रेताको साथ तपाईंको सम्बन्ध बुझ्नको लागि महत्वपूर्ण छन्। तपाइँको कम्पनीले यी मुद्दाहरूको लागि चलाउँछ भने एक विक्रेता संग तपाइँको अनुबन्ध र सम्बन्ध के हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनुहोस्:
रद्द - तपाइँ अब सास प्लेटफर्मको आवश्यकता वा वहन गर्न सक्नुहुन्न। स्व-सेवा कम्पनीहरूले सामान्यतया a०-दिन सूचना वा उनीहरूको प्लेटफर्म मार्फत तत्काल रद्दको प्रस्ताव गर्दछ। कम्पनीबाट सावधान हुनुहोस् तपाई क्रेडिट कार्डबाट अनलाइन साइन अप गर्नुहुन्छ तर तपाईको खाता बन्द गर्न फोन गर्नुपर्नेछ। यो बिलि online अनलाइन रोक्न यत्तिको सजिलो छ यो सुरू गर्न सजिलो छ! अनबोर्डि,, परामर्श र समर्थन भएका कम्पनीहरूका लागि, months महिनाको न्यूनतम सम्झौता वा सो भन्दा बढी विशिष्ट छन्।
उपयोग - तपाईले प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ - या त बढियो वा घटाइयो। तपाईको प्रणालीको गैर प्रयोग वा न्यूनतम प्रयोगका लागि छुट दिनुपर्दछ र सफ्टवेयर प्लेटफर्मको अत्यधिक प्रयोगको लागि तपाईलाई दण्डित गर्नु हुँदैन। मूल्य निर्धारण को लागी समायोजन गर्नु पर्छ र लगानी मा तपाईको फिर्ती बढ्नु पर्छ तपाईले प्रणाली को अधिक उपयोग गर्नु पर्छ।
एक वकील को तैयार मा हुनु सधैं उत्तम योजना हो! धेरै पटक हामी फालिएको थियो यो मात्र हो किनभने हामीले हाम्रो शानदार वकिल द्वारा सम्झौता पारित गरेनौं एलेर्डिंग क्यास्टर हेविट.
टैग: एजेन्सी लाइसेन्सिंगएजेंसी मूल्य निर्धारणबिलिङबिलि terms सर्तहरूसम्झौता घोटालासम्झौतालागत प्रतिअधिक शुल्कसाससफ्टवेयर सेवाको रूपमासफ्टवेयर प्रयोगप्रयोगका शर्तहरुनाबालिग शुल्क